Infographic: Akụkọ dị mkpirikpi nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-eme ka ndị mmadụ nweta ike na iru nke organic elekọta mmadụ media ahịa, ọ ka bụ netwọkụ nke siri ike ịchọpụta na -enweghị nkwalite. Mgbasa ozi mgbasa ozi na -elekọta mmadụ bụ ahịa na -adịghị adị naanị afọ iri gara aga mana ewepụtara ego ruru ijeri dọla 11 site na 2017. Nke a sitere na naanị ijeri $ 6.1 na 2013.
Mgbasa ozi mmekọrịta na -enye ohere iwulite mmata, ebumnuche dabere na mpaghara ala, igwe mmadụ, na data omume. Ọzọkwa, enwere ike idobe ọtụtụ mgbasa ozi n'akụkụ isiokwu dị mkpa. Ọtụtụ nyiwe na -enyekwa ohere ịre ahịa maka ndị ọbịa hapụrụ saịtị gị ma ọ bụ ụgbọ ahịa wee laghachi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Adịghị m mgbe niile a onye mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụ ezie. Oge m na-agbasa mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ebumnuche nke onye ọrụ mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ha nọ na otu ndị na-elekọta mmadụ ebe mmasị dị na mgbasa ozi ahụ, ọ nwere ike rụpụta ezigbo nsonaazụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ebumnuche nke onye ọrụ ahụ bụ ịga leta ndị ezinụlọ ha na ndị enyi ha ma ị na-echekwa mgbasa ozi ndị na-adịghị mkpa n'etiti… nwere ike ị gaghị enweta nsonaazụ ịchọrọ ịkwado mkpọsa na-aga n'ihu.
Ihe ọzọ dị mkpa nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze bụ iji hụ na ejiri njikọ data gị rụọ ọrụ nke ọma. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-eji ngwa, ọtụtụ n'ime ndị ọbịa ahụ nwere ike igosi dị ka nleta ziri ezi na gị nchịkọta ikpo okwu ebe ọ bụ na ngwa anaghị ahapụ na-ezo aka na isi mmalite dịka a pịrị njikọ ahụ ma mepee ihe nchọgharị na-akpaghị aka.
Unified mere ihe omuma ihe omuma a iji gosiputa oganihu nke nyiwe mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Ejikọtara ọnụ bụ ihe ngwụcha ngwụcha maka nghọta nke data na-akwalite, njikarịcha nri mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana mgbasa ozi mmemme n'ofe netwọkụ mmekọrịta niile n'otu ikpo okwu.
Tags: onye na -emepụta iheFacebookego mgbasa ozi facebookfacebook mgbasa ozi apifacebook mobile mgbasa ozifacebook nkwado akụkọakụkụ anọLinkedInenweta egolinkedin mgbasa ozi apiego mgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi na-elekọta mmadụmmefu mgbasa ozi ọha na ezeelekọta mmadụ mediamgbasa mgbasa ozi mgbasa ozisụọ ngọngọtumblrTwitterNweta ego mgbasa ozi twittermgbasa ozi twitter apitwitter mgbasa ozi api mmekọNweta ego mgbasa ozi twitteryahooyoutube
Dee 23, 2016 na 7: 01 AM
Ndewo ekele maka ihe omuma ihe omuma. M na ya onwe malitere online in1998 uzo tupu Social media á »bá» even na echiche na ugbu a lee uto! ọ bụ onye na-agba ịnyịnya crazy ekele
Aug 13, 2021 na 1:00 PM
Ọmarịcha infographic na dịka ọnụ ọgụgụ 2021 si kwuo ọnụọgụ ndị mmadụ na -eji mgbasa ozi mmekọrịta ugbu a ruru ijeri 3.95 nke dị ịtụnanya. Ọ dị ka igwe mgbasa ozi nọ ebe a ka ọ nọrọ maka ọdịnihu.